Jurgen Klopp oo kala doortay kan wanaagsan xidigaha Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo – Gool FM
Jurgen Klopp oo kala doortay kan wanaagsan xidigaha Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo
(Liverpool) 23 Nof 2018. Macalinka Kooxda Liverpool Jürgen Klopp ayaa go’aansaday inuu ka jawaabo su’aal ay iska diideen inay ka jawaabaan macalimiin iyo ciyaartoy badan ee caalamka ku sugan, taasoo ku aadan kan wanaagsan xidigaha Lionel Messi ama Cristiano Ronaldo.
Macalinkii hore kooxda Borussia Dortmund ee Jürgen Klopp ayaa wuxuu daboolka ka qaaday xidiga uu u arko inuu fiican yahay Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
“Isbarbardhiga ayaa ah mid aan cadaalad aheyn, waana sida in la kala doorto tartamada Champions League iyo Premier League, lakiin aniga waxaan dooqan lahaa Messi, inkastoo aan labaduba jeclahay”.
Intaas kadib Jürgen Klopp ayaa waxaa wax laga weydiiyay in Liverpool uu dib ugu soo celin karo ku guuleysiga tartamada yurub ama horyaalka Premier League wuxuuna ku jawaab celiyay
“Liverpool ma aysan ku guuleysan horyaalka Premier League, aniga ahaan shakhsiyan ma jiro wax isbeddel ah, waxaan jeclaan lahaa inaan kuwada guuleysano Champions League iyo Premier League, waa waxaan xiiseenayo inaan sameeyo”.
Si kastaba Liverpool ayaa dib ugu soo laaban doonta bari oo Sabti ah kulamada horyaalka Premier League, kadib marka ay wajahaan kooxda Watford, iyaga oo ku qasban inay gacanta ku dhigaan saddexda dhibcood, si ay cadaadiska ugu hayaan Manchester City oo hogaanka kaga heysa 2 dhibcood oo kaliya.
Maxaa ka jira in John Cena uu ka fariistay Ciyaaraha WWE/MASAARICADA??
“Ma jirto qof kaga xaq badan Cristiano Ronaldo abaal marinta Ballon d'Or 2018”